Ọnụ Ụzọ Igwe Mmiri Ntugharị Azụmahịa China Manufacturer
Nkọwa:Ọnụ Ụzọ Ntugharị Iko Ihe Ntucha Siri Ike,Kpochie Ọnụ Ụzọ Iyi Ngwunye,Ọnụ Ụzọ Epeepe Glass Gbasara Anya
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ mpepụ akpaaka > Ọnụ Ụzọ Nkedo Glass > Ọnụ Ụzọ Igwe Mmiri Ntugharị Azụmahịa
Ọnụ Ụzọ Igwe Mmiri Ntugharị Azụmahịa
Ihe Nlereanya.: HF-J152
Ebe a na-agbanye ọnụ ụzọ HongFa enwere ike iji ya mee ihe maka akwukwo akwukwo akwukwo ma obu ndi mmadu na-ewepu onu uzo. a pụkwara itinye ya n'ọrụ n'èzí ọnụ ụzọ iko. Na ntinye nke 4.2m nke ala alumini ma kpuchie ya (ogologo ọkọlọtọ ogologo 4.2m, nwere ike belata dị ka onye ahịa chọrọ), ụda mkpọtụ dịka ígwè na-enweghị ọkụ, onye na-ejighị igwe ma ọ bụ dijitalụ microcomputer, ihe ntanetị ndọtị (German Innosent chip) nnyeghari nhazi nke nhọrọ ma ọ bụ igodo ntanetị ọrụ, ọ dị mfe iji wụnye, debug, rụọ ọrụ na ịnọgide na-enwe ike izute ihe dị iche iche dị iche iche nke ụzọ ụzọ mgbochi dị iche iche.
2 Ụdị ụdị ụda foto: A na-etinye ọkụ ọkụ na-ekpuchi ngwaọrụ na ngwaọrụ eleelectric na-echere ọnụ ụzọ.
3 Ọnọdụ bọtịnụ: Pịa bọtịnụ dị ka mgba ọkụ ka imepee akwukwo akwukwo. Ọnụ ụzọ na-emeghe mepee ma mechie akwukwo akwukwo site na igbanyere, ihicha ma obu mpia. Iji gbochie ohi, ngwá ọrụ pụrụ iche ga-arụ ọrụ n'otu oge ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị mkpa ka a kwadebere ụlọ mpempe aka maka ụlọ dịka onye nwere njirimara onye njirimara ma ọ bụ telivishọn, na ndị ọrụ na-anọghị n'ụlọ na-egbochi ya. A na-eji ụzọ mgbochi eme ihe na ụlọ ahịa ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọdụ ụgbọelu, ụgbọ, akụ na oge ndị ọzọ.
Mkpọchi nke electromechanical: Na-enye nhọrọ nkedo nkedo nke nchekwa maka nchekwa zuru ezu ma nwee ike gbanwee na-enweghị ntuchi akwụkwọ, ntụgharị: E. Ogidi ọnụ ụzọ dị nfe. Mkpọchi bụ usoro nchekwa mkpọchi eletriki microprocessor. Onye na-ahụ maka microprocessor nyochaa akụkụ niile nke ọrụ mkpọchi ahụ. EG Mgbe mkpọchi ahụ dị 100%, jide n'aka na emechiela ụzọ ahụ. Enwere ike ịmepụta mmepụta ngosipụta iji gosipụta ọnụ ụzọ na mkpọchi mkpọchi na nchekwa nchekwa. Ọ bụrụ na-egbochi ije ahụ,
1) Nche: Mgbe ọnụ ụzọ na-agba ọsọ, nkwụsị ahụ ga-amalite ọrụ ịwụgharị na-akpaghị aka. A na-eji anya eletrik elee anya iji chọpụta ihe mgbochi ahụ, ọnụ ụzọ ahụ nwere ike na-ezere ya.
Ajụjụ nke Photocell Safety Device Rapid Roll PVC Ụlọ
Ọnụ Ụzọ Ịgba Glass Na-agbaji Abụọ Na-akpaghị aka Kpọtụrụ ugbu a
Ihe ngosi nke ihe ngosi nke oge a na-agba chaa chaa Kpọtụrụ ugbu a
Akụrụngwa ụgbọala akpaaka akpaaka Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ Ụzọ Ntugharị Iko Ihe Ntucha Siri Ike Kpochie Ọnụ Ụzọ Iyi Ngwunye Ọnụ Ụzọ Epeepe Glass Gbasara Anya Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ezigbo Ntugharị Ọnụ Ụzọ Ntugharị Roller Ọnụ Ụzọ Ntugharị Roller Shutter Ọnụ Ụzọ Ntugharị Rolling PVC Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ntugharị Ntugharị